यस्तो छ राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको तालिका, भम्रणबारे राष्ट्रपति कार्यालय किन बेखबर ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वैशाखको पहिलो साता पाँच दिने भारतको राजकीय भ्रमणमा जाने भएकी छिन् । मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै लाग्दा राष्ट्र प्रमुख भण्डारीले वैशाख ४ गतेबाट पाँच दिने भारत भ्रमण गर्न लागेकी हुन् । उनले वैशाख ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यता राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण तय भएको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय बेखबर रहेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता मोहनप्रसाद वाग्लेले राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक जानकारी नआएको जानकारी दिए । यद्यपी उनले सञ्चार...
सुराकी शीर्षकमा गृहमन्त्री र सचिवको मनपरी, वर्षमै खर्चे ८३ लाख
काठमाडौं । गृहमन्त्री र गृहसचिवले वर्षमा सुराकी खर्चका नाममा ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । यो रकम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गर्ने खर्चभन्दा धेरै हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा गृहमन्त्रीले सुराकी खर्चका नाममा ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । गृहमन्त्रीको सुराकी खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आव ०७२र७३ मा सुरुका तीन महिना एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए । अघिल्लो आवमा गौतमले ४६...
सरकार चेपुवामा : मोर्चालाई मनाउन गरिएका अन्य प्रयास, किन मोर्चाले मानेको छैन?
काठमाडौं – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई फकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रोपटक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याए पनि मोर्चाले अस्वीकार गरिदिएपछि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउने सवालमा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको खबर आजको नागरिकमा छ । सरकारले मंगलबार पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव झन् ‘पछाडि फर्केको’ भन्दै मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि वैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल सहभागी नहुने सम्भावना बढेको हो। त्यसमाथि मधेस केन्द्रित दलहरूले चुनावमा भाग नलिने भन्दै...
खुमबहादुर खड्कासहितका नेता दलको साधारण सदस्य समेत नरहने !
काठमाडौं । भ्रष्टाचार, फौजदारी मुद्दालगायत कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिले अबदेखि दलको साधारण सदस्यसमेत बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता भएको थियो । दफावार छलफलका लागि संसद्ले गत मंसिरमा राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक पठाएको थियो । कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले चार महिना छलफल गरेर तयार पारेको विधेयक ९ चैतमा संसद्बाट पारित भएको थियो । मस्यौदामा ६ वर्षका लागि मात्र दलको सदस्यता नरहने व्यवस्था भए पनि...
पोखरामा आज कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शन, शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने
पोखरा । ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, काँग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ पोखरामा आज कांग्रेसले शक्ति प्रर्दशन गर्दैछ । कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय आमसभाको लागि कार्यकर्ताहरु पोखराका चोक-चोकबाट निस्केको र्‍याली चिप्लेढुङ्गामा आउने क्रम सुरु भएको छ । स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रीत कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको निर्देशनमा आमसभा हुन लागेको हो । आमसभालाई नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला, गृह...
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको चुनावमा एमाले पत्तासाप’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको चुनावमा एमालेले नराम्रो हार व्यहोर्ने दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, ललितपुर महानगरको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले चुनावमा जान कांग्रेस र एमालेसँग एजेण्डा नै भएको बताएका हुन् । ‘गिरिजाबाबुले मेची महाकाली अभियान चलाउनु भयो, कांग्रेस नराम्रोसँग हार्‍यो । हामीले पनि अभियान चलायौं, हार्‍यौं’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले एमालेले मेची महाकाली अभियान चलाएको छ । नराम्रोसँग हार्ने उही हो ।’ ...
प्रधानमन्त्रीसँग आत्तियो एमाले, देउवासँग रिसायो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको विषयमा एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झूठ अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक गरिरहेको दावी गरेको छ । कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको बैठकले भ्रममा नपर्न आम जनसमुदायलाई अपिल समेत गरेको छ । ‘एमालेको नेतृत्वसँग आजसम्म संविधान संशोधनका विषयमा विषयगत रुपमा कुनै गम्भीर र ठोस छलफल प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री स्वयम्ले एमाले नेतृत्वसँग समेत सहमति भएको भन्ने झूठ अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक...
नयाँ शक्तिले सन् २०५० सम्ममा नेपाललाई विश्वकै समृद्ध मुलुक बनाउने
काठमाडौं । दलीय हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएको नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणा पत्रको खाका प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ शक्तिले निर्वाचनलाई पार्टी विस्तारको आधार मानेको छ । यसले तीनै तहका निर्वाचनसँगैदेशका सम्पूर्ण नगर गाउँपालिका र टोल/टोलसम्म पार्टी निर्माण गर्ने भएको छ । बैकल्पिक रानजैतिको रूपमा परिचित नयाँ शक्तिले ५ ‘स’ को सिद्धान्तलाई पनि यही अभियानका क्रममा जनतामाझ पुर्‍याउँदै छ नयाँ शक्तिले आफ्नो चुनावी घोषणा-पत्रमा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि समय तोकेर काम गर्ने...
निकै अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री दाहाल, चार कारण यस्ता छन्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससहित प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्ने दलहरूबाटै असहयोग भएपछि निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति, उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता, एकपछि अर्काे सर्त थप्दै जाने मधेसी मोर्चाको शैली र अदालतको निर्णय अवज्ञा गर्न कांग्रेसले दिएको दबाबले निकै अप्ठ्यारामा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री...
चैतभित्र कार्यक्षेत्र पुग्न एमाले नेतालाई नै निर्देशन
काठमाडौं, २३ चैत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउँदै चैत मसान्तभित्र आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिका पुग्न केन्द्रीय सदस्यदेखि सबै तहका नेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थायी समितिद्वारा गठित महासचिव ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको ‘स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन तथा समन्वय समिति’ ले मंगलबार चैत मसान्तभित्र आफू मतदाता रहेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेर निर्वाचनमा केन्द्रित काम थाल्न निर्देशन दिएको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । संयोजक पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्पूर्ण ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा...
११ जिल्लाको चुनाव दोस्रो चरणमा गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : एमाले र मोर्चाले मान्नेमा देउवाको आशंका
काठमाडौं – स्थानीय चुनावअघि मधेसवादी दलहरुसँग प्याकेजमा सहमति सम्भावना टर्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा चुनाव स्थगित गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीहरु विमलेन्द्र निधि र कमल थापा तथा माओवादी केन्द्रभित्र आफू निकट नेताहरुसँग यस्तो मनसाय प्रकट गरेको उनी निकट स्रोतले खुलायो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ । दाहालनिकट एक सल्लाहकारका अनुसार आइतबारपछि पनि नेताहरुसँग भएका व्यक्तिगत तथा टेलिफोन कुराकानीहरुमा दाहालले यो प्रस्ताव दोहोर्‍याएका छन् । दाहालको प्रस्ताव पुष्टि...
लुम्बिनी, २२ चैत । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जबर्जस्ती निर्वाचन गराइए मुलुकमा द्वन्द्वको विजारोपण हुने बताउनुभएको छ । सद्भावना पार्टी रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो— “मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर स्थानीय तहकोे चुनाव गराए त्यो आफूहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन् ।” संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता समेत रहनुभएका अध्यक्ष महतोले प्रमुख तीन दलको हठका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायको माग पूरा नहुँदासम्म मोर्चामा...
भित्रभित्रै चुनावको तयारी गर्दैछन् मधेसवादी दल : फोरम नेपालका नेता भन्छन्-‘चुनाव हुन्छ, हामी भाग लिन्छौं
विराटनगर – मधेसवादीले मोर्चा कसेर स्थानीय निकायको निर्वाचन बहिष्कार गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई पहिचानवादीले पनि साथ दिएका छन् तर स्थानीय रूपमा भने मोर्चाका नेताकार्यकर्ता नै चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । कुरा मिलेर चुनाव भए भाग लिने नत्र हुन नदिने यस्तै रणनीति छ उनीहरूको । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद जयराम यादव विराटनगरको मेयरमा उठ्ने चर्चाले नगर तातेको छ । फोरमका नेता कार्यकर्ताले पनि यो बहसलाई नकारेका छैनन् । यादव भन्छन्, ‘राजनीतिक सहमति भई पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दियो भने उठ्छु तर...
अन्ततः प्रधानमन्त्रीले दोस्रो वरीयता निधिलाई नै राख्ने पक्का
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूपछिको वरीयतामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई तोक्ने भएका छन् । गत २६ फागुनमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि प्रधानमन्त्रीपछिको वरीयतामा को भन्ने विवाद छ । ‘अब प्रधानमन्त्रीले वरीयता विवाद मिलाउँदै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘मंगलबारसम्ममा उहाँले वरीयता टुंग्याउनुहुन्छ ।’ थापालाई सरकारमा सहभागी गराएर आफूपछिको वरीयतामा राख्न खोजेपछि निधिले प्रधानमन्त्रीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटेर...
मलाई नै आइजिपी बनाउनुपर्यो भन्दै सिलवाल पुगे गृहको ढोकामा
काठमाडौ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) आफूलाई बनाउन माग गर्दै डिआइजी नवराज सिलवालले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । सिलवालले सर्वोच्च अदालतले ८ चैतमा गरेको परमादेशको फैसलाअनुसार आफूलाई महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कपी पनि बुझाएका छन् । र, त्यसको बोधार्थ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गराएका छन् । ‘डिआइजी सिलवालले आफूलाई आइजिपी बनाउन भन्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको निवदेनको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार...